June 2016 – Radio KeyFM
Dhagayso: Xaalada Daacuunka ee Kowntiga Mandera oo soo hagaagaysa.
30th June 2016	Somali Language 0
Waxaa soo yaraanaya tirada dadka uu soo ritay xanuunka Daacuunka oo dhowaan saamayn balaaran deegaanka ku yeeshay. Wariyaha Keyfm ee Mandera Ibrahim Happy ayaa kasoo diyaariyay warbixin la xiriirta cudurkaasi iyo baaq loo jeedinayo dadweynaha deegaanka oo isla cudurkaasi ku aadan
Xukuumada Soomaaliya oo ka jawaabtay Sharci muran badan Dhaliyay
Dowlada Soomaaliya ayaa difaacday xeerka siyaasada qaran ee jinsiga oo dhowaan ay ansixiyeen golaha wasiirada,kadib markii culimaa’udiinka Soomaaliyeed ay soo saareen bayaan ay ku cadeeyeen in xeerkan uu khilaafsan yahay shareecada Islaamka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo saxaafada kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in si qalad …
Booliska Gobolka Xeebta oo Xiray Rag lagu Tuhmayo Alshabab
Booliska Malindi ayaa xiray ilaa 8 qof oo lagu tuhmayo argagixiso daacad u ah in ay yihiin xubno ka tirsan kooxda Argagixisada ee Alshabab. Booliska ayaa xubnahan kasoo xiray Mombasa oo ay u baxsadeen,iyaga oo ka cararay howlgalkii Malindi Nakumatt,2pm. Tuhmanayaasha la qabtay ayaa waxaa kamid ah Sultan Ali Sultan, …
Wakiilo ka tirsan Baarlamanka Garissa oo Dowlada ku dhaliilay latashi la’aan Arimaha Qaxootiga
Wakiilo ka tirsan baarlamanka kowntiga Garissa ayaa sheegay dowlada in ay iska riixday iyaga,marka ay qaadatay go’aanka dib u celinta qaxootiga ku sugan Dhadhaab. Dowlada ayay sheegeen in arinta qaxootiga ay kala tashatay oo kali ah xildhibaanada,iyagana aan waxba laga weydiin. Wakiiladan ayaa waxaa hogaaminayay MCA-ga Fafi,Mustafa Abdirishid,waxaana ay gaarayeen …
Masuuliyiinta Cord oo Ku kala Aragti duwan Liiska ka qayb galaya Wada hadalka IEBC
Tartan dhanka awooda oo ka dhex jira Cord ayaa keeni kara dib u dhac ku yimaada isku daba ridka koox baarlamaani ah oo loo saaray dib u habaynta gudiga doorashooyinka. Habeenkii Talaadada,waxaa kulan albaabadu u xirnayeen qaatay xisbiyada ku midaysan Cord,sida ODM,Ford Kenya iyo Wiper,waxaana ay kawada xaajoonayeen tixgalinta wakiilada …
Xubnaha Isgaarsiinta Madaxtooyada Kenya oo la kala diray
Xubnaha ka tirsanaa laanta qorshaynta isgaarsiinta madaxtooyada (PSCU) ayaa la kala diray,kadib markii la sheegay in arinta warbixin aan la cadayn ay u soo gudbiyeen dadweynaha. Amarkan ayaa waxaa baahiyay,ku xigeenka madaxa shaqaalaha madaxtooyada,Nzioka Waita isaga oo ka wakiil ah madaxweyne Uhurur Kenyatta. Amarka ayaa saameeyay dhamaan agaasimka laanta isgaarsiinta …
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa si adag u cambaareeyay Weerakii Argagixiso ee lagu qaaday Garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalda Istanbul. War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu sheegay in weerarkaas uu ahaa mid waxuushnimo ah, waxaa lagu tilmaamay in ujeedka weerarkaas argagixisada ka leedahay ay tahay in …
29th June 2016	Somali Language 0
DHageyso: Culima u Diinka Mandhera oo ka muujiyay dadka Muqaadaraadka ka ganacsada Culima u diinka countiga Mandhera ayaa walaac ka muujiyay dadka ka ganacsada muqaadaraadka eek u sugan countiga Mandhera, gaarahaan midka ku soo badanaya magaalooyinka Ceelwaaq iyo Mandhera. Culimada ayaa ka dhigay saameynta muqaadaraadka uu ku yeelan karo bulshada …
Maxkamada Mandera oo lasoo taagay Nin ku Eedeysan in aanu haysan Sharci.
Nin u dhashay dalka Soomaaliya ayaa maxkamada Mandera lasoo taagay,isagoo lagu oogay dambi ah in uu wadanka sharci darro ku joogay. Maxkamada ayaa ku xukuntay bixinta 400,000 oo shilin ama 4-sano oo xabsi ah in uu qaato. Kahie Ibrahim Derie ayaa kahor qirtay eeda loo soo jeediyay garsoorka sare ee …
Dowladda Kawntiga Wajeer ka oo ka heli doonto kawaanka cusub Sh4 billion
Kawntiga Wajeer ayaa lagu wadaa in ay helaan lacag dhan 4 bilyan oo shillin sanadkii,hadii kawaanka weyn ee kawntigaasi la dhamaystiro, kaasi oo la sheegay in dhismihiisa goor dhow la gabagabayn doono. Kawaanka ayaa la sheegay in awood uu u leeyahay in lagu qalo 1500 oo neef (ari, loo, geel …